Dom » Kaydso qaybta "Apple HomeBridge"
Amazon Alexa, Apple HomeBridge, Guriga Google, dib u eegista
Twinkly 250 RGBW nalalka Kirismaska. Dib u eegid
Nalalka geedka kirismaska, indho indheyn, indha indheyn 250
Ciidaha xitaa miyay noqon karaan kuwo sixir badan xalka caqliga leh? Waxaa soo baxday in haa! Iyo nalalka geedka kirismaska ​​ee caqliga leh ee 'Twinkly' ayaa kaa caawin kara. Dib-u-eegista, waxaan hubiyaa nooca 250 RGBW. Twinkly waa shirkad dhalinyaro ...
Amazon Alexa, Apple HomeBridge, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, News
Ambi waxay soo saartay hago qaboojiye caqli leh - Ambi Climate Mini
ambi, Cimilada Ambi, Cimilada Cimilada 2, Ambi Cimilada Mini
Ambi waa shirkad fadhigeedu yahay Hong Kong oo ay ku leedahay faylalka ay maamusho hawo casri ah. Waxay hadda soo saartay nooc cusub oo loogu magac daray - Ambi Climate Mini. Ambi waxay horey u laheyd kontoroolayaal "weyn" oo ku jira faylalka ay ka shaqeeyaan, sida ...
Apple HomeBridge, Apple HomeKit, Kaaliyaha Hoyga, Casharrada, Hoyga Xiaomi
ZigBee - waa maxay wax walba oo ku saabsan iyo yoolkee la dooranayaa?
Albaabka ZigBee. Qof walba wuu maqlay wax, laakiin markay ku soo dhacdo iibsashada, su'aalo adag ayaa soo baxa. Wax walba miyay ku shaqeyn doonaan? Ma u baahan tahay inaad leedahay yoolal badan? Maqaalka maanta, waxaan si faahfaahsan ugu sharixi doonaa ZigBee oo waxaan tusi doonaa waxa ...
Apple HomeBridge, Apple HomeKit, FIBARO, Guriga Google, Kaaliyaha Hoyga, IKEA Home Smart, Casharrada, Hoyga Xiaomi
Sidee loo magacaaba aaladaha guriga ee caqliga leh? Tilmaanta
Miyaad ogtahay dareenkan markaad rabto inaad damiso laambada hoolka gudaheeda, oo Siri si adag bay u iftiimisaa qolka jiifka? Mise waxaad rabtaa inaad xidho indhoolayaasha qolka fadhiga isla markaana Google uu go'aansado inuu xidho dhammaantood? Tilmaamahan waxaan kuugu sheegi doonaa…
Apple HomeBridge, Casharrada
Sida loo taakuleeyo HomeBridge on Rpi 4 (macOS)
guriga, bacda guriga, Rasberi pi 4b
Ka bilaawida madadaalada HomeBridge waa inaan xasuusano hal shay oo aad muhiim u ah - sameynta kayd. Adduunku wuxuu u qaybsan yahay laba kooxood oo dad ah. Kuwa iyagu gurmad u sameeya iyo kuwa bilaabay inay wax qabtaan. Tan…
HomeBridge - Plugins Xullo [Muuqaal]
bacda guriga, gelanayo
Muuqaalka fiidiyowga ee maanta, waxaan kula wadaagi doonaa xirmooyinka HomeBridge ee ii fududeeyay sidii aan gurigeyga u maamuli lahaa. Waxaa jiri doona LG, Philips iyo dabcan Xiaomi. Waxaan si xoogan kuugu dhiirigelinaynaa inaad daawato!
Apple HomeBridge, Apple HomeKit, Guriga Google, Casharrada
Xakameynta aaladda HomeBridge (HomeKit) aaladda loo adeegsado Google Home [Video]
guriga google, bacda guriga, Homekit
Waxaan ku soo bandhigaynaa fiidiyow kale kanaalkayaga YouTube! Markan waxaan xakameyn doonaa aaladda HomeBridge (HomeKit) adoo adeegsanaya Google Home!
HomeBridge plugins at jaleecada
Markaad go’aansaneyso inaad dhigto HomeBridge, su’aal kale ayaa soo baxeysa - waa kuwa tabeellada aan dooranayaa? Laydhka HomeBridge oo is-ku-ool ah oo aan dhibaato lahayn ayaa ka dhigi doona qalabka la doonayo inuu ka muuqdo HomeKit. Dhanka kale, guluusyada cilladaysan ayaa ka dhigi kara daruur ...
Jahannamo ayaa barafoobay - xakamaynta aaladaha HomeKit iyada oo loo marayo Google Home!
Maan fileynin in markaan ka kacay sariirta subixii. Si kastaba ha noqotee, markii aan helay Google Home Hub, waxaan ogaaday inaan ku qasbanahay inaan wax ka qabto si aan u xakameeyo gurigeyga caqliga leh. Gaar ahaan haddii guud ahaan ...